Hômeo hypoid bevel gearmotor amidy Hotoo motera Hypoid
Hohoo fanamboarana gearmotor Hypoid ho an'ny varotra
Hetsika Hypoid Gear
Hetsika maotera Hypoid amidy
Mpanazatra matihanina amin'ny motera maotera hypoid spiral.
Fanamboarana motera Hypoid
Mpanamboatra motera Hypoid miaraka amin'ny tabataba ambany sy ny fahombiazany avo.
Hetsika fanoratana hypoid
Hypoid Gearbox avy any Sogears dia manolotra ny faratampony amin'ny fampisehoana fampitana entana sy fampidinana entana ho an'ny fampiharana avo lenta amin'ny servo driven.
Fanomezana fitaovam-pandehan'ny hypoid
Manana ny teknika kilasy voalohany nanapaka ny fanamboarana fitaovana hypoid.
Hômeo hozatra hypoid bevel amidy
Zoro ankavanana Hypoid bevel gearmotor Matetika ampiasaina amin'ny fampiharana fiara
Gear Spare Bevel Gear
Manamboatra fitaovam-pandehan'ny hypoid miaraka amin'ny fahatapahan-dàlana isika, fampiasa amin'ny haingam-pandeha haingam-pandeha mahazatra izay mitaky fanetren-tena betsaka.
Fitaovana haingon-trano hypoid
Mahatsapa ny lavaka lavaka mipetaka amin'ny fitaovana Hypoid napetraka amin'ny motera elektrika
Mpivarotra ambongadiny Hypoid varotra fitaovam-piadiana bevel
Motors boaty hypoid bevel na reducers gear hypoid, dia vokatra vaovao azo ampiharina izay novolavolain'ny orinasanay, izay manambatra ny haitao mandroso any anaty sy any ivelany, ny fahombiazan'ny avo, ny fitsitsiana angovo ary ny fiarovana ny tontolo iainana.
Fonenana alimo aliminioma sy 20CrMnTi ho an'ny fitaovana ao anatiny. ny hamafin'ny faritry ny nify dia 56-62HRC ary ny hatevin'ny sosona carburized dia mitazona 0.3-0.5mm aorian'ny fikosehana tsara. 120W, 180W, 250W, 370W, 550W, 750W, 1100W, 1500W Helical-Hypoid Gear Motor, New Style Model Helical-Hypoid Geared Motor, Standard Flange Input Hypoid Motor.
Fampiasana Flange fenitra Hôlôjia Hypoid Giroma AC.
Ny reducer Hypoid Transmission Gearbox reducer dia ampiasaina betsaka
Indostrian'ny seramika, Indostria fitaratra, Indostrian'ny sakafo, Indostria metallurgy, Indostrian'ny labiera sy zava-pisotro, Indostrian'ny fanontam-pirinty sy fandokoana, Indostrian'ny lamba, Indostrian'ny fanatobiana trano, Masinina miasa hazo, fitaovana fiarovana tontolo iainana Indostria, Indostrian'ny hoditra, Indostrian'ny fivarotam-panafody
Ny serivisy ho an'ny motera Hypoid gear & gearboxes
4.1.Manao ady mandritra ny 12 volana isika.
4.2. Manana reducers an'arivony isika. Avy amin'ny tanjaka Input 0.06KW ka 200KW, Ratio 1.3-289.74, hafainganam-pandeha Output 0-1095rpm sy toromarika torolàlana 1.4-62800Nm. Izy ireo dia mety mahafeno ireo fepetra takiana rehetra ataonao ho an'ny indostria samihafa.
4.3. Manome katalana E-katre na taratasin'ny taratasy isika, ka afaka misafidy mora ny modely araka ny fepetra takinao
4.4.Mandray tsara anao hitsidika ny orinasa izahay mba hanamarina ny vokatra azontsika, afaka manampy anao izahay hamaky ilay hotely na tapakila.
Inona ny fanovana ho an'ny boaty Hypoid?
1. Fitaovana lehibe
(1) Trano: halavola vita amin'ny alumina maty (habe 27 ka hatramin'ny 57)
(2) Kodiarana Gear: 20CrMnTiH1 carbonizing & famonoana hafanana fitsaboana mahatonga ny hamafin'ny gears ambonin'ny hatramin'ny 56-62 HRC, ary tazonina carburization sosona matevina eo amin'ny 0.3 sy 0.5mm aorian'ny fitotoana mazava.
2. Famoronana sary
Trano fonenana allaida:
(1) Fipoahana mitifitra sy fikarakarana antiseptika manokana amin'ny alàlan'ny alloy aluminium.
(2) Aorian'ny fangaro, dia afafazo ny loko fotsy volafotsy RAL9022.
Tandremo rehefa mametraka ireo boaty Hypoid:
1. Alohan'ny hanangonana motera Hypoid sy fitaovana mekanika, fantaro raha marina ny làlan'ny sela famokarana ny motera Hypoid gear.
2. Alohan'ny hanangonana ny motera Hypoid sy ny mojakoja ary fitaovana, alao jerena ny refy ny fivoahana isaky ny savonon-tsivana, ny haingam-bokatra, ny lakile ary ny lakile mba hisorohana ny fampandehanana ny motera Hypoid;
3. Ny moto gear hypoid dia tsy maintsy apetraka amin'ny fitaovana mekanika hialana amin'ny looseness sy ny fantsom-bazaha;
4. Fadio ny fambolena motera Hypoid amin'ny masoandro sy ny tontolo henjana araka izay azo atao;
5. Raha maharitra 4 volana ny fitahirizana ny motera Hypoid dia jereo, raha toa ka feno fantsom-panafody tanteraka ilay menaka fanenona. Ny molotra famehezana ny menaka dia mety hahavery ny elastikao. Koa satria ny elastika mety dia fepetra ilaina amin'ny asan'ny tombo-tsolika menaka, izany dia ilaina ny hanolo ny tombo-bolan'ny solika. ;
6. Ny faritra misy goto sy ny lavaka fantsakana rehetra dia tsy mahazo miloko loko;
7. Rehefa mifamatotra ny sezera tsy misy haingam-bolo sy ny moto matevina an'ny motera Hypoid, dia tokony hipetraka amin'ny menaka mifangaro ny tsiranoka mba tsy handehanana;
8. Ny fatran'ny solika dia tsy maintsy hojerena mandritra ny fampiasana (toy ny vata fitaratra solika na vovo-tsolika misokatra, tsy misy modely kely);
9. Rehefa mampiasa motera maotera Hypoid vaovao dia tsy afaka manomboka amin'ny entana feno izy ary tsy tokony hampitombo ny entana;
10. Rehefa mampiasa karazana motera Hypoid mifandraika mivantana amin'ny motera, raha be loatra ny lanjan'ny môtô, dia tokony homena fitaovana fanohanana;
11. Hamarino fa misy tontolo iainana tsara eo akaikin'ny mpankafy moto mba tsy hisy fiantraikany amin'ny fihenan'ny hafanana;
12. Ny mari-pahaizana miasa amin'ny paikady mahazatra an'ny motera Hypoid dia -5 ° C ka hatramin'ny 40 ° C. Raha tsy ao anatin'ity elanelana ity dia azafady mba hifandraisanao amin'ireo mpahay teknika.
Ny kitapo hypoid dia azo sokajiana ho toy ny boaty bevel.
Zoro fantsom-pahalalana mahomby misy vidiny Hypoid
Ny endrika marika sy mafy orina miaraka amin'ny vidiny mifaninana.
Ny safidy isan-karazany amin'ny safidy output.
Fametrahana mora ary manana fampisehoana tsara miaraka amin'ny toradroa toradroa toradroa 25 hatramin'ny 720 Nm.
Jereo eto ny antsipirian'ny vidin'ny varotra orinasa Moto an'ny Hypoid Gear. Makà mombamomba ny mpamatsy, mpanamboatra, mpanondrana, mpivarotra amin'ny Gears Hypoid ho an'ny fividianana any Chine.
Aza misalasala manontany anay